Iyo nyowani vhezheni yeTor 10.5 browser yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo | Linux Vakapindwa muropa
Pasina nguva refu takataura pano pa blog nezve nhau nezve sarudzo yakaitwa nevakagadziri veTor kutanga kusanganisira Rust mukati mebrowser, iyo mune ramangwana inoitirwa kuti mutauro wepurogiramu uyu utsive C mukuvandudza Tor.
Saka zvino mushure memwedzi gumi yekuvandudza, vhezheni itsva yakaburitswa yakakosha yebrowser kusvika kune yayo vhezheni "Tor 10.5" mune izvo zvinoshanda zvinoenderana nebazi reESR reFirefox 78 rinoramba richigadzirwa.
Kune avo vachiri kusaziva browser, vanofanirwa kuziva kuti izvi inotarisa pakupa kusazivikanwa, chengetedzo uye kuvanzika, traffic dzese dzinodzoreredzwa chete kuburikidza neiyo Tor network.
1 Main nyowani maficha eTor 10.5
2 Dhawunirodha Tor 10.5
Main nyowani maficha eTor 10.5
Yeyakanyanya kukosha shanduko inoratidzwa mune iyi nyowani vhezheni yeTor 10.5 tinogona kusimbisa iyo browser yekuvaka kugona neWayland rutsigiro paLinux.
Imwe shanduko yakakosha ndeyekuti yekare onion V2 masevhisi akamiswa, iyo yatove yakanzi haichashandi kwegore. Kubviswa kwakazara kwekodhi inoenderana neyechipiri vhezheni yeprotocol inotarisirwa mukudonha.
Iyo yechipiri vhezheni yeprotocol yakagadzirwa makore gumi nematanhatu apfuura uye nekuda kwekushandiswa kwemaalgorithms echinyakare, haigone kunzi yakachengeteka pasi pemamiriro azvino. Makore maviri nehafu apfuura, mushanduro 0.3.2.9, vashandisi vakapihwa iyo yechitatu vhezheni yeprotocol yeanion services, inozivikanwa neshanduko kune 56-hunhu kero, chengetedzo yakavimbika kubva kune kudonhedza kwedata kuburikidza nemaseva edhairekitori., Yakawedzera modular chimiro uye kushandiswa kwema algorithms SHA3, ed25519 uye curve25519 panzvimbo yeSHA1, DH neRSA-1024.
Iyo zvakare inomira kunze mune iyi nyowani vhezheni iyo itsva 'Snowflake' gedhikuvaka-mune zambuko masuo ayo anoshandiswa kubatanidza kune Tor kukiya nzvimbo, uchishandisa network yemazvipiri-anochengetedzwa proxy maseva.
Mukushanda, chando chando yakafanana neye proxy, asi inosiyana mukutambudzika kweNAT. Kudyidzana nemaproxies kunoitwa uchishandisa iyo P2P WebRTC protocol, iyo inotsigira kupfuura vashanduri vekero.
Parizvino mapurovhinzi zviuru zvisere ari kushanda zuva nezuva, ichimhanya pamhando dzakasiyana siyana kutenderera pasirese. Kuchengetedza netiweki yakakura yemaseva eproxy kunoitiswa nenyaya yekuti kutanga proxy yako haufanire kumhanyisa server server, asi panzvimbo pezvo isa yakakosha browser plug-in pane yemushandisi sisitimu. Iko kubatana kwekutanga kunoshandisa »kumberi domain« hunyanzvi, iyo inobvumira HTTPS kutariswa nekutsanangudza dummy inomiririra muSNI uye kupfuudza rakakumbirwa zita revagari muHTTP inomiririra musoro mukati mechikamu cheTLS (semuenzaniso, unogona kushandisa network kugovera ku dzivisa kuvhara).
Mukuwedzera, zvakare Iwo maratidziro ekutanga kubatana kune Tor network yakagadziridzwa, iyo yakafambiswa kubva kupaneru kuenda kuchikona chikuru uye yakaitwa muchimiro che peji idzva rebasa "About: torconnect". Iyo bhurawuza ikozvino inozviona yega basa reakaongororwa maneti uye inopa akavharika masuo ekudzivirira kuvhara uye zvakare Kuyerera kuyerera kwevashandisi vebrowser kwakagadziridzwa.
Chekupedzisira, mukuzivisa kweshanduro iyi nyowani, zvinotaurwa zvakare kuti NoScript 11.2.9, Tor Launcher 0.2.30, libevent 2.1.12 nerutsigiro rweCentOS 6 zvabviswa.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo yeiyi nyowani vhezheni yebrowser, unogona kutarisa kune yekutanga noti Mune inotevera chinongedzo.
Dhawunirodha Tor 10.5
Kune avo vanofarira kugona kushandisa vhezheni itsva, vanogona kurodha pasi browser kubva chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Iyo nyowani vhezheni yeTor 10.5 browser yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo